musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » North Korea inovhara muganho: Coronavirus
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • dzidzo • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • North Korea Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Nei North Korea yakavhara maganho ayo?
- North Korea yakavhara miganhu yayo kudzivirira kupararira kweCoronavirus, ichibva kuWuhan kuChina - asi yakabva yapararira kunze kwenyika.
Musi wa20 Ndira 2020, zvakasimbiswa kuti hutachiona hwanga hwapararira kuSouth Korea, uye zvakabva zvataurwa kuti zvapararira kune dzimwe nyika dzakaita seUS neJapan.
► Ko North Korea yakaita izvi zvisati zvaitika here?
Mune ese ari maviri 2003 (SARS) uye 2015 (Ebola), North Korea yakavhara miganhu yekushanya.
► North Korea ichavhura riini miganho zvakare?
Nehurombo, isu hatizive kuti North Korea ichavhura riini kushanya zvekare.
Izvi zvinowanzoenderana nekupararira kwehutachiona uye kuti inonamira kwenguva yakareba sei.
Unogona kuverenga zvakawanda pane yedu webhusaiti peji pano iyo yatichange tichichengeta kumusoro-ne-ruzivo neruzivo uye zvichangobva kuitika, pamwe nemhinduro kumibvunzo yako